Zennies စျေး - အွန်လိုင်း ZENI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zennies (ZENI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zennies (ZENI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zennies ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $193 311.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zennies တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zennies များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZenniesZENI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00013ZenniesZENI သို့ ယူရိုEUR€0.00011ZenniesZENI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0001ZenniesZENI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000119ZenniesZENI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00118ZenniesZENI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000822ZenniesZENI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0029ZenniesZENI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000487ZenniesZENI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000174ZenniesZENI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000182ZenniesZENI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00291ZenniesZENI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00101ZenniesZENI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000705ZenniesZENI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00975ZenniesZENI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0218ZenniesZENI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000178ZenniesZENI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000197ZenniesZENI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00406ZenniesZENI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000906ZenniesZENI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0138ZenniesZENI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.155ZenniesZENI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0493ZenniesZENI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00959ZenniesZENI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0036
ZenniesZENI သို့ BitcoinBTC0.00000001 ZenniesZENI သို့ EthereumETH0.0000004 ZenniesZENI သို့ LitecoinLTC0.000002 ZenniesZENI သို့ DigitalCashDASH0.000001 ZenniesZENI သို့ MoneroXMR0.000001 ZenniesZENI သို့ NxtNXT0.00936 ZenniesZENI သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 ZenniesZENI သို့ DogecoinDOGE0.0377 ZenniesZENI သို့ ZCashZEC0.000001 ZenniesZENI သို့ BitsharesBTS0.00512 ZenniesZENI သို့ DigiByteDGB0.00487 ZenniesZENI သို့ RippleXRP0.000453 ZenniesZENI သို့ BitcoinDarkBTCD0.000005 ZenniesZENI သို့ PeerCoinPPC0.000452 ZenniesZENI သို့ CraigsCoinCRAIG0.0596 ZenniesZENI သို့ BitstakeXBS0.00558 ZenniesZENI သို့ PayCoinXPY0.00228 ZenniesZENI သို့ ProsperCoinPRC0.0164 ZenniesZENI သို့ YbCoinYBC0.00000007 ZenniesZENI သို့ DarkKushDANK0.0419 ZenniesZENI သို့ GiveCoinGIVE0.283 ZenniesZENI သို့ KoboCoinKOBO0.0308 ZenniesZENI သို့ DarkTokenDT0.00012 ZenniesZENI သို့ CETUS CoinCETI0.377